Coleslaw ngosuku ngalunye
Omunye imifino adumile ezinothe ngamavithamini C, A, E namaminerali, iyona iklabishi fresh. Kukholakala ukuthi ngaphezulu Vitamin C sauerkraut, ngakho-ke akuyona nje limnandi, kodwa futhi ewusizo. Nokho, kuyeza ehlobo - isikhathi iziketi esifushane futhi eziqongweni. Ngakho kudingeka uzigcine isesimweni esihle, futhi lokhu kuyadingeka ukuze kusimamiswe ekudleni kwakho kwansuku zonke. Nakani yini wena udle, futhi sikhethe kahle. Manje entwasahlobo amavithamini ohamba ezweni lonke, ngakho udinga Thenga kakhulu amavithamini namaminerali, okuyinto ecebe kangaka iklabishi fresh.
Ngakho, iklabishi kubhekwa ngempela mnandi futhi sinempilo, ngakho uma udle iklabishi isaladi nsuku zonke, wena kungathuthukisa umzimba wakho ne amavithamini kanye ngesikhathi esifanayo ukunciphisa umzimba. Kukhona izindlela eziningi salads ne ukwengeza hhayi kuphela iklabishi, kodwa futhi anyanisi bese isanqante. Abanye abantu bakhetha nje isaladi iklabishi, kungekho usawoti obengeziwe futhi refueling.
Bewazi yini ukuthi iklabishi akusizi kuphela, futhi kuthuthukisa kwegazi futhi unezinhlobo ezingaba ngu izakhi mkhondo ukuthi laba kanjani nesandla ekukhuleni kwebele? Isikhathi esining impela la mantombazane asemancane ngezinye abafuna ukwandisa ubungako bawo, qala usuku ngalunye udle iklabishi, ukuba umphumela ongcono. Nokho, zonke ezinhle, zonke ngaphezulu ukuze umzimba akusho ahlupheke, kodwa kunalokho kube uthola izakhi. Yingakho-ke iyasiza nsuku zonke ube coleslaw. Yiqiniso, ungakwazi ukupheka isobho noma iklabishi wokukucima, kodwa kuyasiza kakhulu njengoba injalo iluhlaza. Ungakwazi alungiselele ukudla kwasekuseni, abaningi ngisho uthanda coleslaw nge kolbasoy- lokhu mnandi futhi sinempilo.
Uma ufuna ukwenza isaladi, uthole ikhanda iklabishi fake nquma it, bahlanganise izandla ukuze iklabishi uye ithambe. Uma loku kungentiwa, isoseji ilahlekelwa ukunambitheka kwako. I ezincane wena narezhete imifino, ngcono. Bese wengeza ukuba isoseji oqoshiwe noma ham (ezimweni zombili, isaladi Kuyophumela ethubeni simnandi kakhulu, kodwa uma ubeke ham, ukunambitheka isaladi bazobuyekezelwa inyama ngabhema). Ngokuphelele uhlanganise konke, engeza usawoti, pepper kanye inkathi amafutha sunflower. Nokho, abanye uthanda imayonnaise, ngoba unika ukunambitheka eyinqaba. Ngemva kwalokhu isaladi kalula imenze etafuleni nekujabulisa abangane.
Ngokuvamile, umkhaya ngamunye imfihlo ukuthi ukupheka iklabishi isaladi. Abanye bangase ngisho nokwengeza ukuba uviniga, kodwa uma ufuna ukupheka isaladi okubabayo iklabishi. Yiqiniso, akuyona njengoba ewusizo, ngoba uviniga burns abanye amavithamini. Yebo, futhi uviniga akuyona Kusizuzisa kakhulu ngesisu sakho, ikakhulukazi uma uhlushwa nezifo ezingamahlala khona.
Omama abaningi abasemakhaya, okwenza coleslaw, ukungezwa amabele kanye crab izinti. Ukunambitheka kuvela ehluke ngokuphelele, sihluke isaladi evamile, kodwa akukho okubi nakakhulu. Kuningi zokupheka for salads kungatholakala kuyi-Internet, ikakhulukazi emasayithini lapho abafundi babelana bebodwa. Ngamunye uzoba ngumnikazi UCWANINGO ukuthi liyini isaladi okumnandi kakhulu, bese wabelane nabanye abafundi. Kuyaphawuleka ukuthi isaladi iklabishi futhi ikhambi kuhle izifo eziningi, njengoba lena kweqembu wangempela amavithamini. Ngezinye izikhathi, esikhundleni ukuthatha amaphilisi ukuthi odokotela linqume ngokwanele nje izikhathi ezimbalwa ngesonto ukudla iklabishi isaladi, okuyinto iyoba uhlobo lokuvikela. Ngaphezu kwalokho, kubuye kube indlela enhle ukuba ulahlekelwe isisindo amantombazane abangafuni ukuba ahlukumeze ngokwakho ne ukudla okuningi. Vele uthole ezinye izindlela futhi uqale ukupheka wena njalo ekuseni isaladi ahlanzekile, okuyinto enhle kakhulu ezizothinta umzimba wakho, isikhumba sakho, izinwele zakho kanye nezinzipho. Leli yithuba enkulu ukuba anciphise umzimba, ukudla okumnandi.
"Amaphupho zabesilisa" Salad - okungcono isipho Culinary ongasipha othandekayo
Isaladi okumnandi nge inkukhu kanye amakhowe
Ngilusizo ithanga isaladi
I isaladi yasekuqaleni futhi okumnandi "UCarmen"
Inkukhu isaladi nge ikhukhamba
Umuthi 'Terzhinan "ngesikhathi sokukhulelwa: Izibuyekezo iziguli nodokotela. Kungenzeka yini ukuba umuntu "Terzhinan" phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Izimpendulo zabanikazi baka-Akita Inu: incazelo yezohlobo, isithombe
Ukukhetha stroller umntwana. Inglezina Sofia
Kangakanani luhlolo ngumuntu wezifo zabesifazane: akunjalo scary njengoba kubonakala
Kanjani ukwakha sauna in the "Maynkraft" nokuthi kuzomele sifake?
Cyanobacteria - kuyinto ... Cyanobacteria: isakhiwo, ulwazi olujwayelekile
Anopheles omiyane. Akuve kuyingozi luma?
Okufanele ukwenze uma lapho uvula isikrini laptop omnyama
"Belarus" (moonshine): Izici kanye nokubuyekeza